Uhlobo lwePolite yifonti efihla amagama amabi | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Uhlobo oluChubekileyo yifonti entsha enophawu "lokunxiba" okanye "ukuziguqula" okanye "ukufihla" amagama athile isandi esibi ngoluhlobo: *****. Thatha intelekelelo encinci kwaye uya kuqonda ukuba liliphi igama.
La Ingqondi emva kwalo mbono wefonti kukuphawula, kuba umthombo unoxanduva "lokufihla" phantsi kohlobo lokufiphaza loo magama mabi. Ukusuka kwiwebhusayithi yayo ungazama ukuba babone ukuba ibafihla njani kwaye idale imvakalelo yokuba asiyifundi, kodwa engqondweni yethu ivakala ngathi injalo.
Uhlobo oluChubekileyo yifonti yenziwe yinkampani yetekhnoloji yaseFinland iTietoEVRY Kwaye ngubani ophethe ukulungisa okanye ukufihla loo magama athi ngamanye amaxesha aphume eze kuthi, kodwa ayile nto eyiyo.
Kodwa kukho injongo emva kokwenza oku typeface kwaye inento yokwenza nokuxhatshazwa kwe-cyber abantu abatsha abafumana kwiinethiwekhi zonxibelelwano. Kukwindawo enye Uhlobo lwePolisi olucekeceke apho unokufunda khona: «Yifonti yomthombo ovulekileyo ebhala kwakhona amagama ayingozi ukuwafaka amanye afaka phakathi. Sifuna ukudala indawo yeengxoxo ezibalulekileyo zokwenza umhlaba ukuba ube yindawo ekhuselekileyo, ebandakanya wonke umntu.
Enyanisweni, "Awubi" uba "Awumhle ngokwesiko", ngelixa amabinzana anje ngo ****** engenantsingiselo ngokupheleleyo ukuze angaqondwa; Nangona bekutshiwo, bayaphambuka kodwa kuthi kubonakala ngathi leliphi igama. Mhlawumbi lolona hlobo lubalaseleyo lohlobo onalo kwiwebhusayithi yakho.
Le fonti ibandakanya, ngaphandle kwalonto uphawu olutsha olungagqitywanga, ifonti ye-OpenType (OTF) ukuze uqaphele kwaye ufumane indawo efanelekileyo ngakumbi yamagama ahlaselayo kunye namabinzana kwivenkile yeencwadi esebenza kokubini ngaphandle kweintanethi nakwi-intanethi. Siyakukhuthaza ukuba uyikhuphele. Siza kubona ukuba lo mthombo uqhubela phambili njani onokunika uninzi lwawo. Kwaye ukuba awukwazi ukutsala le fonti ye-quirky evela kwi-IKEA.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Ukuphefumlelwa » Le fonti efihla i-***** ilungile